लगातार चार दिन देखि मृगस्थली जाँदै पारश शाह ! के गर्ने गर्छन् मृगस्थलीमा ?
काठमाडौँ, पूर्व युवराज पारश शाह अहिले नियमित रुपमा मृगस्थली जाने गरेको समाचार सम्प्रेषण भएको छ। लगातार चार दिन देखि मृगस्थली जाँदै गरेका उनि आज बिहीबारको दिन आफ्ना छोरा हृदयेन्द्र सहित शाही परिवारका केहि सदस्य लीएर मृगस्थली जाँदै छन्। मृगस्थलीस्थित गुरु गोरक्षनाथ धाममा उनि विभिन्न विषयमा कक्षा लिन जाने गरेको खुलासा भएको हो।
गुरु गोरक्षनाथ धाममा बृहद आध्यात्मिक परिषद रहेको छ। तत्कालिन राजा श्री ५ महेन्द्रले गठन गरेको यस परिषदको संरक्षण पनि उनि आफैंले गर्ने गरेका थिए। परिषद अन्तर्गतनै पर्ने ‘बृहत् आध्यात्मिक परिषदको पुस्तकालय’मा संचालन हुने विशेष कक्षामा भाग लिनको लागि पूर्व युवराज पारश शाह मृगस्थली जाने गरेका हुन्।
विभिन्न विषयमा ज्ञान राख्नको लागि पराश सहित हृदयेन्द्र मृगस्थली जान लागेका हुन्। नौनाथ, गोरक्षनाथ, शाहवंश र गुरु गोरक्षनाथको अन्तर्सम्बन्ध साथै र्मशास्त्र अनुसारको वैदिक चार सत्ताका बारेमा ज्ञान लिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। यसको अलवा उनले नेपालमण्डल र गोरखा विस्तार, शाहवंशका देन, पृथ्वीनारायण शाहको राज्य सञ्चालन नीति, दिव्य उपदेश, महेन्द्र नीति, योगी नरहरिनाथ र मौलिक शिक्षा नीति, अर्थनीति तथा ईतिहासकालका बारेमा तयार भएमा श्रव्यदृष्य सामाग्री मार्फत ज्ञान लिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ २४, २०७५१२:४६
नरेन्द्र मोदीले अध्यक्ष ओलीलाई किन टेलिफोन गरे….यस्तो रहेछ कारण!!
कुनै धर्म विशेषलाई काखी च्यापेर अर्कोलाई निषेध गर्ने नीति लिनु हुँदैन-प्रचण्ड !
जनताको जलविद्युत्को पहिलो शेयर म किन्छु : प्रम ओली !
९ बजे देखि त्रिभुवन विमानस्थलमा ठूलै प्राविधिक समस्या ! कुनै पनि उडान नहुँदा यात्रु मर्कामा !
सन्दीप लामिछाने आबद्ध मेलबर्न स्टार्स १३ रनले पराजित !